घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू जर्मन फुटबल खेलाडीहरू फ्लोरियन Wirtz बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो फ्लोरियन Wirtz जीवनी तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, आमा बुबा, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थका बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेप मा, यो फ्लोरियन Wirtz को पूर्ण जीवन इतिहास हो, एक फुटबलर जो एक आक्रमणकारी मिडफिल्डरको रूपमा खेल्दछ। उसको कथाको हाम्रो संस्करण उसको शुरुका दिनहरूदेखि शुरू हुन्छ जब उनी खेलमा प्रख्यात भए।
फ्लोरिअन विर्टजको जीवनीको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा भूख मिटाउनको लागि, उनको प्रारम्भिक जीवन र उदय ग्यालरी हेर्नुहोस्। तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि यसले आफ्नो बायोको सारांश दिन्छ।
फ्लोरियन Wirtz को जीवनी। उनको प्रारम्भिक जीवन र महान उदय हेर्नुहोस्।
जर्मन फुटबल मा एक आगामी आगामी प्रतिभा को रूप मा सम्मानित, बायर Leverkusen मा काई Havertz द्वारा आयोजित कूल रेकर्ड तोडेर उनले लोकप्रियता प्राप्त गरे। कोही भन्छन् कि उनी जुलीयन ब्रान्ड जस्ता खेल्छन् तर हामी उनलाई आफ्नो पुस्ताको सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर्सको रूपमा देख्छौं।
उसको युवा नामको सम्मान भए पनि, एउटा सत्य भने बाँकी छ। केवल केही फुटबल प्रशंसक फ्लोरियन Wirtz को बायो संग परिचित छन्। हामीले यसलाई तयार गरेका छौं, किनभने हाम्रो खेल प्रति हाम्रो प्रेम छ। अब थप विज्ञापन बिना, हामी सुरु गरौं।
मार्को रीस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फ्लोरियन Wirtz बचपन कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले उपनामहरू राख्छ - फ्लोरी र नयाँ काई हयात। फ्लोरियन रिचार्ड विर्ट्जेको जन्म मे २००3को तेस्रो दिनमा जर्मनीमा पुलहिममा भएको उनकी आमा, करिन विट्स र बुबा जोआकिम विट्समा भएको थियो।
आउँदै गरेको जर्मन प्रतिभा संसारमा पहिलो छोरा र दोस्रो बच्चाको रूपमा आईपुग्यो, जुन यहाँ चित्रण गरिएको आफ्ना बाबुआमाको बीच मिलनबाट जन्मेको हो।
Manuel Neuer बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फ्लोरियन विर्ट्जका अभिभावकहरूसँग भेट्नुहोस्। उसको बुवाको नाम जोआकिम विट्ज हो जबकि उनको आमा, करीन विट्स।
फ्लोरियनकी जेठी बहिनी जुलियानसँग हुर्केका थिए - दुई वर्ष उनी जेष्ठ। भाइबहिनीहरूले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू ब्रुवेइलरमा बिताए जुन जर्मन शहर पुल्हेमको हिस्सा हो।
सामान्यतया, साना भाइहरूको जहिले पनि उनीहरूको दाइ वा दिदीबहिनीको हृदयमा विशेष स्थान हुन्छ। यो फ्लोरियन र जुलियानको हो। बच्चाहरू वयस्क भएसम्म पनि, एक सानो भाई भएकोले कहिलेकाँही उनलाई उसलाई रिस उठाउने अधिकार दिन्छ। जुलियानको लागि, उनलाई सहने जिम्मेदारी।
फ्लोरियन विर्ट्जका आमा बुबाले उनलाई उनकी जेठी बहिनी जुलियानसँगै हुर्काए।
उनीहरूको भाईको बखान गर्दै उनीहरूले साझा गरेको ठूलो भाई-बहिनीको सम्बन्धमा जुलियानले एक पटक भनेका थिए;
घरमा, फ्लोरी अझै मेरो सानो भाई हुनुहुन्छ जसले कहिलेकाँहि मलाई दु: ख दिनुहुन्छ (हाँसो)। मैदानमा, उहाँ धेरैका लागि नायक हुनुहुन्छ।
फ्लोरियन Wirtz परिवार पृष्ठभूमि:
जर्मनको परिवारमा, सबै जना फुटबल र सास फेर्छन्। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, खेल उनीहरूको शिराहरूमा चल्छ र यो विर्ट्जको पारिवारिक मामिला हो। फ्लोरियन Wirtz का दुबै आमाबुवा फुटबल एजेन्टहरु हुन् जसले केवल आफ्नो क्यारियरको प्रबन्ध मात्र गर्दैनन्।
वास्तवमा, फ्लोरियन विर्ट्ज ड्याड, जोआकिमले एसभी ग्रान-वेइ ब्राउवेलरका अध्यक्षको रूपमा थप भूमिका खेल्दछन्। यो तिनीहरूको गृहनगरमा एक स्थानीय क्लब हो - जहाँ उनका दुबै बच्चाहरू (फ्लोरियन र जुलियान) ले आफ्नो प्रख्यात क्यारियर शुरू गरे।
अन्तिम तर कम्तिमा पनि जुलियानि वर्त्ज हो - फ्लोरियानकी जेठी बहिनी। उनी पनि एक फुटबलर हुन् जसले लेखनको समयमा बायर ० L लेभेरकुसेन महिलाका लागि डिफेन्डरको भूमिका खेल्छिन्। जुलियान - २०२१ सम्म - जर्मनी यु १ 04 टीमको लागि पनि सुविधा राख्छ।
फ्लोरियन Wirtz परिवार मूल:
सेतो जर्मन जातिको फुटबलर पश्चिम जर्मनीमा अवस्थित उत्तर राइन-वेस्टफालियाका हुन्। यो सब भन्दा जनसंख्या भएको राज्य र देशको चौथो-जनसंख्या भएको शहर हो। उत्तर राइन-वेस्टफालियाको ठूलो कोलोन नामको शहर र सानो शहर पुल्हेम छ, जहाँ उसका बाबुआमा थिए।
यद्यपि पुल्हेममा जन्म, फ्लोरियन Wirtz को परिवारको जरा त्यहाँ थिएन। तिनीहरू ब्राउवेइलरबाट आएका हुन्, उनीहरुको गृहनगर, जुन पुलहिमको एक भाग हो, कोलोनको पश्चिममा, जर्मनीको उत्तर राइन-वेस्टफालिया।
प्रति Mertesacker बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फ्लोरियन Wirtz शिक्षा:
करिन र जोआकिम विट्जका लागि उनीहरूका बच्चाहरूलाई स्कूलमा राख्नु प्राथमिकता थियो - जुन फुटबल क्यारियर उठाउने जत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। फ्लोरियन Wirtz आफ्नो प्राथमिक शिक्षा आफ्नो गृहनगर, Brauweiler मा शुरू गर्नुभयो। उनी आफ्नो क्यारियरमा प्रगति गर्दै जाँदा पनि उक्त युवाले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाए।
पछि, उनको परिवार ब्राउवेइलरबाट ओप्लाडेन, लेभेरकुसेन जिल्लामा बसाई सरे। यहीं उनले आफ्नो उच्च शिक्षालाई निरन्तरता दिए। जर्मन टेबलोइड अखबार (बिल) अनुसार, फ्लोरियनले २०२१ मा हाईस्कूलबाट स्नातक गरे - जुन वर्ष मैले उनको जीवनी लेखें।
थमस मुलर बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
फ्लोरियन Wirtz फुटबल कहानी:
सुरूदेखि नै, जोआकिम र करीन आफ्ना बच्चाहरूको लागि उत्तम योजना थिए। अध्यक्षको ओहदामा, एसभी ग्रान-वेइ ब्राउवेइलर (एक फुटबल एकेडेमी) ले अदृश्य बुबाको लागि जीवन सजिलो बनायो। Age बर्षको उमेरदेखि उनले फ्लोरियन र उनकी दिदी जुलियान दुबैलाई आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा भर्ना गरे।
GRün-Weiß Brauweiler को साथ प्रारम्भिक जीवन:
धेरै सफल परिवार चालु फुटबल व्यवसायहरु एक जीत / जीत हो। फ्लोरियन र उसको जेठी बहिनी जुलियान दुवैले आफ्नो बुबाको नेतृत्वमा आफ्नो क्यारियर शुरू गर्ने फाइदाहरूको आनन्द उठाए। जोआकिम विट्सले चीजहरू आफ्नो छोरासँग राखेका थिए र यसले उनलाई एकेडेमीमा बढ्न मद्दत पुर्‍यायो।
लियोया सेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
फ्लोरियन7वर्षको उमेरमा पुग्दा, उनका आमाबुबाले निर्णय लिनुभयो कि ऊ कतै खेल्न जान्छ ताकि ऊ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, करिन र जोआकिम आफ्ना जूलियान दुबै जूलियनलाई मात्र होइन, अर्को ठाउँमा फुटबल खेल्ने सन्दर्भमा जीवन कसरी काम गर्दछ भन्ने धारणा बुझ्न चाहन्थे।
वर्ष २०१० मा, फ्लोरियन ठूला प्रतिष्ठानहरूमा परीक्षण सुरू गर्नको लागि तयार थियो। त्यो वर्ष, उनको परिवार ब्राउवेइलरबाट फ्रान्ज-क्रेमर-आले गए र उनलाई एफसी कलिनसँग भेट्न पठाए। यो सफलतापूर्वक गयो र फ्लोरियन FC Köln संग भर्ना भयो। एक मौसम पछि उनकी बहिनी (जुलियान) उनीसँग त्यहाँ सामेल भए।
एफसी Köln मा सम्मिलित गर्ने निर्णय राम्रो निर्णय थियो किनकि यसले दुबै दिदीबहिनीलाई आफ्नो बाबुआमालाई स्वतन्त्र रूपमा बिना तिनीहरूको सपना पछ्याउँदछ। उनीहरूको पारिवारिक घरबाट एकेडेमीको दूरीले एक लाभ उठाउँदछ किनकि यो लगभग १। किमि (२० मिनेट ड्राइभ) हो।
फ्लोरियन Wirtz जीवनी - फेम कहानी को सड़क:
आफ्नो नयाँ एकेडेमी मा, फ्लोरियन Wirtz आफ्नो पेशेवर फुटबॉल सपनाहरु साकार गर्नको लागि दृढतापूर्वक दृढ संकल्प गर्न शुरू गर्नुभयो। यसलाई बनाउने दृष्टिकोण एक पारित कल्पनाको रूपमा गएन। फुटबलको लागि विशाल जोशले उनलाई यो आफ्नो काम बनाएको देख्यो।
कलारु विल बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
आफ्नो चौथो वर्षमा, जवानले आफ्नो पहिलो ट्रफी जित्यो। कडा प्रतिस्पर्धा भएको फाइनलमा, फ्लोरियन विर्ट्जले एफिएसी कोलन एकेडेमीलाई राइडर जेएफके इनडोर टूर्नामेंट जित्न मद्दत गर्‍यो। यहाँ जवान छ किनकि उसले नाटकीय क्षणहरू प्रस्तुत गरेको थियो जसले दर्शकहरूलाई उत्साहित गर्‍यो - जसका चियर्सले कुनै सीमाहरू जान्दैनथ्यो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… उसले फाइनलमा आफ्नो टीमका लागि दुवै गोल गरे।
फ्लोरियन Wirtz संग, FC Köln मिडफील्ड केही छैन। स्टारलेटले त्यस पछिका सत्रहरूमा केवल गोल मात्र गरेन, तर उसको पास सुरक्षा, द्वंद्वको शक्ति, आक्रामक सुरुवात, बिजुली-द्रुत स्विच र उच्च रणनीतिक अनुशासनबाट पनि प्रभावित भयो।
आफ्नो पक्षको लागि १० नम्बरको जर्सी लगाएका, एक आक्रामक मानसिकता भएका युवाले २०१ 10 मा जर्मन च्याम्पियनशिप जितेको एफसी कोलनको यु १ team टीममा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। धेरै गतिशील मिडफिल्डरलाई देशको पश्चिमी भागको सर्वश्रेष्ठ जर्मन युवाको रूपमा लेबल लगाइएको थियो।
फ्लोरियन विर्ट्ज (बाँया) र जेन्स कास्ट्रोप (दायाँ) उनीहरूको एक प्रसिद्ध ट्रफी मनाउँदैछन् - २०१ 2019 मा जर्मन च्याम्पियनशिप।
फ्लोरियन Wirtz बायो - फेम सफलता कहानी उठ्नुहोस्:
डिसेम्बर २०१ around को वरपर उसको U17 खेल मध्ये एक, आक्रमणकारी मिडफिल्डरले हाफवे लाइनबाट १०-० ले हरायो प्रतिद्वन्द्वी, Wuppertal। तलको भिडियो हेर्नुहोस्।
यसले फ्लोरियन विर्ट्जलाई घरेलु ख्यातिमा गोली दियो किनभने क्लबहरू उनको हस्ताक्षरको लागि शार्कजस्तै घुमाउन थाले। त्यो खेल FC Köln को लागी उसको अन्तिम खेल भयो।
बायर लेभेरकुसेनले २०२० जनवरीमा बोलाई आएका क्लबहरूमा प्रवेश गरे। फ्लोरियन विर्ट्जका अभिभावकहरूसँग उनीहरूको सुविधाहरूको भ्रमण सहित सफल बैठक पछि आक्रमणकारी मिडफिल्डर छोराले अन्तत: बेअरेनाको बाटोमा प्रवेश गर्यो।
ब्रेकिंग जर्मन रेकर्ड:
अण्डर १ 17 टीमको लागि प्रभावित भएपछि, Wirtz सफलतापूर्वक वरिष्ठ फुटबल मा स्नातक। उनले १ records मे २०२० मा लेभेरकुसेनको लागि व्यावसायिक पदार्पण गरेपछि उनले रेकर्डहरू तोड्न शुरू गरे। पहिलो, फ्लोरियन विर्ट्जले पछाडि पार गरे काई हयात १ever वर्ष १ 17 दिनको उमेरमा लिगमा डेब्यू गर्ने लिभरकुसेनका कनिष्ठ खेलाडीका रूपमा।
एक महिना पछि (जून २०२० का 6th औं), विर्ट्जले लिवरकुसेनको लागि पहिलो गोल Bay th औं मिनेटमा बायर्न म्यूनिखको बिरूद्ध गरे। त्यो गोलले विर्ट्जलाई बनायो बुन्देस्लिगा इतिहासमा सबैभन्दा कान्छो गोल स्कोरर। उनले १ 17 बर्ष र 34 XNUMX दिनको उमेरमा त्यो हासिल गरे। यो रेकर्ड पछि पार गरिन्छ Youssoufa Moukoko (१ 16 बर्ष र २ days दिन उमेर)
अर्को रेकर्ड पछि जहाँ उनी १ 18 औं जन्मदिन अगाडि पाँचौं लिग क्यारियर गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छो खेलाडी बने, जोआकिम लो (जर्मन कोच) ले यसलाई अझै समात्न सकेन। वीर्ट्जले मार्च २०२१ मा २०२२ फिफा वर्ल्ड कप क्वालिफायरका लागि जर्मनीको वरिष्ठ टोलीलाई पहिलो पटक फोन गरे। उनको जीवनीको बारेमा हामी भन्छौं कि यो इतिहास हुनेछ।
फ्लोरिअन रिट्जको प्रेमिका वा पत्नी हुन को हुनुहुन्छ:
के तपाईं यहाँ प्रेममा करुण र जोआकीमको छोरोको बारेमा जानकारी लिन आउनु भएको छ? फ्लोरिअन विर्ट्जको प्रेमिका वा श्रीमती को हुन भनेर पत्ता लगाउन के तपाईंमा तीव्र इच्छा छ? लाइफबगर पनि त्यस्तै हो र यसैले हामी अनुसन्धानमा फसेका छौं - किनकि यसबारे अनुसन्धान गर्न लायक छ।
सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, फ्लोरियन विर्ट्ज बुन्डेस्लिगा रेकर्डहरूले प्रमाणित गर्दछ कि ऊ निर्माणमा सफल मान्छे हो। र प्रत्येक सफल फुटबलरको पछाडि, त्यहाँ एक ग्लैमरस फुटबल WAG वा प्रेमिका हुनुपर्छ।
सत्य भन्नु हुन्छ, फ्लोरिअन विर्ट्जको मनमोहक मुस्कानले उसको खेलको शैलीको साथमा केटीले आफ्नो प्रेमिका, आफ्नो बच्चा वा पत्नीको आमा हुन चाहने महिलालाई आकर्षित गर्दैन भन्ने कुरालाई इन्कार गर्ने कुरा छैन।
सबै ईमानदारी मा, हाम्रो टीम को सबै को लागी, फ्लोरियान Wirtz प्रेमी को कुनै संकेत को लागी खोजी गरीएको छ। अब बायर लेवरकुसेन आक्रमण गर्ने मिडफिल्डर गोप्य रूपमा कसैलाई डेटि? गर्न सक्छ? यदि हो, त्यसो हो भने उसको निजी जीवनको बारेमा जानकारी सार्वजनिक हुनु अघि यो कुराको कुरा हो।
फ्लोरियन विर्ट्ज को हो? ... पिचमा उसले गर्ने कुराहरूबाट टाढा। जर्मनको गतिविधिहरूबारे जान्न - बाहिरको फुटबलले तपाईंलाई उसलाई अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ।
सर्वप्रथम पहिलो, फ्लोरियन विर्ट्ज कोही हुन् जसलाई शिक्षा वा ज्ञानको लागि निरन्तर तिर्खा छ। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसलाई केवल सिक्न मन पर्छ र यो मुख्य कारण यो हो कि तपाईले उनलाई उसको अध्ययन डेस्कमा भेट्नु हुन्थ्यो जस्तो कि उहाँ कहिले पनि उनलाई भेट्न आउनुहुन्छ।
दोस्रो: उसको व्यक्तित्वको सन्दर्भमा, फ्लोरियन विर्ट्ज होमबडी देखिन्छ। यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने, यो शब्द भनेको कसैलाई परिभाषित गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन घरमा समय खर्च गरेर रमाईलो गर्दछ।
यद्यपि अनुसन्धानमा यो छ कि ऊ पूर्ण विकसित प्रकारको मानिस होइन, जसको अर्थ हामीले उहाँलाई ठूला ठूला चीजहरू गरीरहेका छौं - जुन उनको जीवनीको अर्को खण्डमा देखाइएको छ।
फ्लोरियन Wirtz जीवन शैली:
छुट्टी विश्रामको बखत, तपाईंले सम्भवत जर्मन आफ्नो परिवारको घरमा अध्ययन गरेको वा आराम गरिरहनु भएको छैन। उसलाई आफ्नो शौक - जेट स्कीइ doing गर्दै गरेको भेटिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, फ्लोरियन रिट्जले आनन्दित जीवनशैलीको आनन्द उठाउँदै सुख्खा पानी गन्तव्यहरूमा।
फ्लोरियन Wirtz पारिवारिक जीवन:
के तपाईंलाई थाहा छ किन उसको फुटबल घर परिवार यति सफल भयो? यो किनभने तिनीहरू एक अर्कालाई घनिष्ठ मित्रको रूपमा देख्छन्। फ्लोरियनले जर्मनीको ट्याबलोइड अखबार बिल्डसँगको अन्तर्वार्ताको बेला खुलासा गरे। उसको बायोको यो खण्डले उसका आमा बुबा र भाइबहिनीहरूको बारेमा बढी प्रकट गर्छ।
फ्लोरियन Wirtz बुबा को बारे मा:
बोर्डको नेतृत्व गर्ने र फुटबल क्लबको रणनीतिक मामिलामा केन्द्रित हुने अध्यक्ष हुनु कुनै सजिलो काम होइन। यो मानिस, जोआकिम विट्स, मात्र यो हासिल गरेको छैन। दुईजनाका बुबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई (फ्लोरियन र जुलियान) बनाएका छन् जो ग्रेन-वेइ ब्राउवेइलरबाट अहिलेसम्म आएका छन्।
आफ्नो व्यस्त कामको तालिका र आफ्नो एजेन्टको रूपमा आफ्नो छोराको क्यारियरको निरीक्षणको बावजुद, दुईका बुबा प्रायः आफ्ना छोराको खेलहरू हेर्न सबै समय पाउँछन्। जर्मन बिल्डका अनुसार, फ्लोरियानको क्षति नगरी मैदान छोडेर जोआकिम विट्स बढी खुसी हुन्छन्।
फ्लोरियन विर्ट्जकी आमाको बारेमा:
विश्वमा केवल थोरै ममहरू छन्, जसले केवल फुटबल एजेन्टहरू मात्र होइनन् तर सफल छोरी र छोरा जन्माएका छन् - जो दुबै एकै क्लबमा खेल्छन्। फ्लोरियन र जुलियानकी आमा कारिन विट्ज ती महिला हुन् जसले सूचीमा माथि थिइन।
Karin फुटबल व्यापार भन्दा बढी गर्छ। उनी आफ्ना बच्चाहरूको नैतिक मूल्यमान्यताको प्रमुख निर्माता हुन्। जर्मन बिल्ड ट्याबलोइडसँग कुराकानी गर्दा हामीले पत्ता लगायौं कि उनले आफ्ना पतिसँगै फ्लोरियन र जुलियानलाई सबैलाई आदरपूर्वक, विशेष गरी बढी अनुभवी टीमका साथीहरूको साथ व्यवहार गर्ने सम्झना गराउँछिन्। उनको अनुसार;
नम्रता र आदर दुई महत्त्वपूर्ण गुणहरू छन् जुन हराउनु हुँदैन। हामीले फ्लोरियन र जुलियानो जुत्तामा मेमेन्टोको रूपमा राख्यौं। अहिलेसम्म, हामीसँग कुनै चिन्ता छैन।
फ्लोरियन रिट्जको बहिनीको बारेमा:
उनको भाइ जस्तै, जुलियानि Wirtz पनि बायर ० L लेभेरकुसेन र colors्गमा उड्दछ जब म यो बायो लेख्छु। २२ अगस्त २००१ को जन्ममा त्यसले फ्लोरियान भन्दा १ वर्ष, months महिना र १० दिन जेठो हो भन्ने संकेत गर्दछ।
जुलियान सोह्र वर्षको उमेरमा पेशेवर फुटबल महिला बुंडेसलिगा डेब्यू हुन् र उनले २०१ 2015 देखि युवा स्तरमा जर्मनीको प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेकी छ। २०२१ सम्म उनले निम्न कुरा हासिल गरिसकेकी छिन्; (१) जर्मन बी-जूनियर उप-चैम्पियन २०१//१ ((१. एफसी कोलनको साथ) (२)
U-19 वाइस यूरोपीयन च्याम्पियन २०१ 2019।
फ्लोरियन Wirtz तथ्यहरु:
आफ्नो जीवनी को माध्यम बाट यात्रा पछि, हामी हाम्रो संस्मरणको यो अन्तिम अंश ठूलो आगामी जर्मन फुटबल प्रतिभा को बारे मा अधिक सत्यको अनावरण गर्न प्रयोग गर्नेछौं।
तथ्य # १ - उनीहरूले उनलाई ढिलो गर्छन्:
फ्लोरियन विर्ट्ज माता-पिताले उनलाई सधैं भूमिमा राम्रो राख्थे। जहाँसम्म, त्यहाँ एउटा चीज छ जुन फ्यानहरूलाई थोरै थाहा छ। फ्लोरियनले एक पटक एक्सेल स्प्रिन्जर एसईको जर्मन ब्लीडलाई भने कि उनका बुबा र आमा प्रायः उसलाई तल देखाउनुहुन्छ - यो हाँस्दै भनिएको थियो। सत्य यो हो कि, योआचिम र करीन प्रायः आफ्ना छोरालाई उसको शरीर र उमेर भन्दा कडा परिश्रम गर्न रोक्छन्।
तथ्य #2- फ्लोरियन Wirtz वेतन ब्रेकडाउन र तुलना:
तपाईंले फ्लोरियन Wirtz पढ्न शुरू गर्नुभयो'बायो, यो उसले बायरसँग कमाएको हो।
फ्लोरियन Wirtz बायर Leverkusen वेतन (यूरो मा - €)
प्रति वर्ष: 781,200
प्रति महिना: 65,100
प्रति हप्ता: 15,000
प्रति दिन: 2,142
हरेक घण्टा: 90
हरेक मिनेट: 1.4
प्रत्येक सेकेन्ड: 0.02
के तपाईंलाई थाहा छ?… फ्लोरियन विर्ट्जको वार्षिक तलब बायर लेभरकुसेनसँग गर्न जर्मन नागरिकले १ 18 वर्ष6महिना काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य #3- फ्लोरियन Wirtz FIFA संभावित:
जहाँसम्म भविष्यका मिडफिल्ड लडाईहरू फिफा क्यारियर मोडमा सम्बन्धित छन्, फ्लोरिअन विर्टज जस्ता युवाहरू दुई अमेरिकन- वेस्टन म्याककेनी र Moisés Caisedo पक्कै रक हुनेछ। नबिर्सनुहोस्, जर्मनले १ 17 औं घडीमा उसलाई F F फिफा सम्भावना पाएको थियो।
भविष्यमा फ्लोरियन विर्ट्जले के गर्ने छ? ... उत्तरहरूको खोजीमा हामीले युट्यूब च्यानलहरू अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेका छन जुन उनीहरूले फिफा ग्रोथ टेस्ट गरेका छन्। हाल, उहाँ एक थोमस मुलर हुन चाहानुहुन्छ। यद्यपि उसको विकास परीक्षणको अन्तिम नतिजाले विश्वको सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्रकट गर्दछ।
तथ्य #4- फ्लोरियन Wirtz धर्म:
लेखेको समयमा, फुटबलर एक विश्वास गर्न उदासीन। पिच भित्र र बाहिर, त्यहाँ इशाराको कुनै संकेत भेटिएन जुन उनको धर्मको अभ्यासमा दर्साउँछ। तसर्थ, उहाँ कहाँको हो भनेर जान्न गाह्रो छ।
यद्यपि हामीले पत्ता लगायौं कि फ्लोरियान एक यूनिसेक्स दिइएको नाम हो जुन पुरानो रोमन नाम फ्लोरिअनसबाट लिइएको हो। उनको आमाबाबु (जोआकिम र करीन) ले ईसाईको नाम बोकेका तथ्यले उनी त्यो धर्ममा जन्मिने सम्भाव्य छ भन्ने संकेत गर्दछ।
फ्लोरियन Wirtz को जीवनी लेखन को क्रम मा, हामी एक सफल फुटबल परिवार को एक रहस्य बुझ्न भयो। मानहरूको स्थिर संचार, निकटतामा फोकस र खेलमा बढ्नको लागि पूर्ण दृढ संकल्प। यो जीवनशैली अनुभवी जस्तो छ Thorgan र ईडन हजर्ड.
वास्तवमा, यो कुनै श without्का बिना जान्छ कि फ्लोरियन विर्ट्ज जर्मन फुटबलमा एक ठूलो आगामी प्रतिभा हो। कहिलेकाँही हामी सोच्दछौं, फुटबल बच्चाहरू हुर्काउने र परिवार चलाउने, एजेन्टहरू हुने र फुटबल क्लब चलाउने: कसरी उनका आमाबुबा (कारिन र जोआकिम विट्ज) ले लोड गर्छन्?
फ्लोरिअन वर्ट्जको जीवन ईतिहासमा १ with वर्ष पुरानो रहनका लागि धन्यबाद उच्च विद्यालयका विद्यार्थी जसले विशेष क्षणहरू उत्पादन गरे। Lifebogger मा, हामी कथाहरूको वितरण गर्न हाम्रो दैनिक प्रतिबद्धतामा शुद्धता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं जर्मन फुटबल खेलाडीहरू.
कृपया हाम्रो सम्पर्क पृष्ठ मार्फत हामीलाई पुग्नुहोस् यदि तपाईंले फ्लोरियन वर्ट्जको जीवनीमा राम्रो नमिल्ने कुनै कुरा भेट्टाउनुभयो भने। थप रूपमा, हामी तपाईंलाई खुशी दिन्छौं यदि तपाईंले टिप्पणी खण्डमा German फुट5इन्च जर्मन आक्रमण गर्ने मिडफिल्डरको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ भनेर हामीलाई बताउनुभयो भने। फुटबलरहरूको संस्मरणको छोटो सारांशको लागि, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
फ्लोरियन Wirtz Wiki पूछताछ
पुरा नाम: फ्लोरियन रिचार्ड Wirtz
उपनामहरू: फ्लोरी र नयाँ काई हावर्ड्ज
जन्म मिति: मे १32003। को २rd औं दिन
अभिभावक: करिन विट्ज (आमा) र जोआकिम विट्स (पिता)
सिबलिंग: जुलियन विट्ज
बुबाको पेशा: GRün-Wei Brauweiler अध्यक्ष र फुटबल एजेन्ट
आमाको पेशा: फुटबल एजेन्ट
उचाइ: १.1.76१ मिटर (f फिट ११ १-२ मा)
नेट मूल्य: १ मिलियन यूरो (२०२१ तथ्या )्क)
बायर लेवरकुसेन फुटबल डायरी